Sandals Resorts honeymoon ita pamusoro pekutsvaira: Unogona kukunda!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Resorts honeymoon ita pamusoro pekutsvaira: Unogona kukunda!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Tourism Kutaura • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts Honeymoon vanoita pamusoro pekutsvaira
Kupemberera vachangoroora vasina kuwana hope dzavo dzehusiku panguva yechirwere, nyanzvi murudo uye kudanana paSandals® Resorts iri kupa vakaroora mukana wechipiri nemazuva makumi matatu eHoneymoon Do Overs.
Yakanakisa ese-inosanganisirwa nzvimbo yekambani iri kupa zviroto zvehusiku muCaribbean kune denda richangobva kuchata.
Shangu dzinopa vakaroora mukana wekuhwina rudo rwemazuva manomwe kuenda kumuchato kwemaviri pane chero yavo 15 Yemahombekombe Yakabatanidzwa® nzvimbo dzekutandarira.
Sandals Resorts International inotenda kuti kana paine munhu anokodzera zororo izvozvi, vachangobva kuchata.
"Gore rapfuura iri rakaomera vese, uye hapana chinhu chinoita kuti tifare sekugamuchira vakaroorana vodzokera kumahombekombe edu eCaribbean uye kupemberera kwavo nyaya dzerudo nezviitiko zvakamirirwa kwenguva refu," akadaro Marsha-Ann Donaldson-Brown, Director weRomance kuSandals Resorts. International. “Kana nguva dzekuchata nemarongero emuchato zvakamiswa gore rapfuura, timu yedu yakashanda pamwe nevakaroora vedu kupa mhinduro dzemhedzisiro-yenguva, kusanganisira kuronga mazuva avo chaiwo kusvika pese pavanga vakagadzirira. Rudo uye kudanana ndizvo zvatiri chaizvo kuSandals Resorts, uye tinofara kupa vakaroorana zororo remuchato ravanokodzera kuti vagopemberera rudo rwavo nenzira kwayo, muparadhiso. ”
Mazuva ese kubva munaJune 15 kusvika Chikunguru 14, 2021, maSandals Resorts anokatyamadza mumwe murume nemukadzi vanokodzera uye nekuvapa nemufaro wemazuva manomwe / matanhatu-husiku Hwakanaka Hwakapfekerwa Honeymoon kune chero nzvimbo dzavanogara muJamaica, Antigua, Grenada, St. Lucia, iyo Bahamas neBarbados, yehuwandu hwakazara hwemakumi matatu ekupa. Vanokunda vachaziviswa vhiki nevhiki nevane mibairo mikuru vanowana mari yekuchata kwevaviri muRudo Nest Butler Suite® uye makumi maviri nematanhatu ekutanga mubairo vanogamuchira zororo rekugara munzvimbo yedeluxe. Kupinda ma sweepstakes, vachangoroora vanogona kuzvisarudzira ivo kana vamwe vaviri neanosvika mazana mana-pfupiso yechikonzero nei ivo vachifanirwa nehope yehoneymoon inopfuura.
Sezvo nzvimbo dzekuchengetera dzakagadzirirwa vanhu vaviri murudo, Sandals inosanganisa kudanana nguva dzese nezvose kubva kuRudo Nest Butler Suites® uye nerudo rwemakenduru emanheru kuenda kune-pamusoro-iyo-mvura hammock dzakagadzirirwa maviri uye epachivande emadziva emvura akagadzirirwa yekuvharirwa kwekupedzisira. Paunenge uchienda kuzororo kune chero ipi zvayo yeSandals Resorts 'gumi nemashanu emahombekombe emahombekombe egungwa kuCaribbean, vakaroorana vanogona kupinda munzvimbo dzinosvika gumi nematanhatu dzakasarudzika maresitoreti pane imwe nzvimbo yekutandarira, pamwe nemabhawa emhando yepamusoro, akadai seLatitudes Pamusoro peMvura Bar - Sandi' yekutanga sandari yemvura pfungwa ine 15 ° maonero egungwa uye rakawanda jongwe. Pamusoro pezvo, vashanyi vanokwanisa kuwana yemitambo isingagumi yepasi uye yemvura, senge yekukweva snorkeling uye kukwidza padhoo, pamwe nekuvaraidzwa masikati neusiku, kugadzira imwe-ye-ye-mhando, yese-inosanganisirwa kusangana kwevaviri uko "rudo ndizvo zvese zvaunoda . ”
Kupinda maSandals Resorts 'Honeymoon Ita Kupfuura Sweepstakes, shanya https://www.sandals.com/honeymoon-do-over-sweepstakes/. Kuti udzidze zvakawanda nezveSandals 'Luxury Included® honeymoon experience uye kubhuka "Honeymoon Do Over" yako wega, shanya www.mumusi.com/honeymoons.
1 miriyoni yekudya kunoendeswa kuIndia hutano ...
Fraport June 2021 Traffic Mifananidzo: Kudzoreredza mu ...